April | 2010 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
A Poem For The Selfish April 25, 2010
Filed under: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING,OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 5:34 am
မီဒီယာအချို့ ရင်ဖွင့်တတ်လာတာ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း
သူတို့ရဲ့ချပ်ဝတ်တန်ဆာက တတိယ အသံထုတ်တာဆိုပဲ
မိတ်ဆွေရဲ့ ကဗျာရွတ်သံပဲ ကြားယောင်မိရဲ့
‘သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာဟာ ဒဏ်ရာတွေသာဖြစ်တယ်’။
အဲဒီထမင်းဝိုင်းမှာ ပညာတတ်အမည်ခံ အုပ်စုက
ထမင်းဆိုတာ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားတွေဆီကလာတာ။
ကိုယ်ကျိုးရှာ မောဟဘီလူးတွေဟာ ရှိနေစမြဲပဲ။ ။
ABMA Journal (Vol. 1, No. 6) April 21, 2010
Filed under: JOURNALS — Nyo Gyi @ 11:33 am
Than Shwe News (18, April, 2010) April 19, 2010
Filed under: MY NEWS — Nyo Gyi @ 1:38 pm
Filed under: Bombs,Election,OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 1:37 pm
Another ThinGyan Bombs Blasts at MyitSone Dam Project April 17, 2010
Filed under: Bombs,OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 12:27 pm
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၌ ဗုံးများပေါက်ကွဲ
(MyitSone Dam Photo – http://lwannaing.blogspot.com/2010/02/blog-post_9898.html)
သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ (၁၅၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်) နေ့ခင်း ရန်ကုန် X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်ရှေ့ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဗုံးသုံးလုံးအကြောင်း ပြောကြလို့မပြီးသေးခင် ယနေ့ သင်္ကြန် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ (၁၇၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀) မှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ဆုံအရပ်ဒေသ၌ ဗုံးများ ထပ်ကွဲပြန်ပါပြီ။
တရုတ်၊ ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်မီးပေးရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဦးတည်ကာ ဧရာဝတီမြစ်အစ မေခ၊ မလိခမြစ်ဆုံကို ခွ၍ ဆောက်လုပ်နေသည့် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၌ သင်္ကြန် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ (၁၇၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်) နံနက်အစောပိုင်းက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ (၄)ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး (၁၂)ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း http://www.kachinnews.com နှင့် အခြားသတင်းအေဂျင်စီများအရ သိရှိရသည်။ Asia World Company အဆောက်အဦး၌ ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူအများစုမှာ တရုတ်လုပ်သားများဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ဗုံးများဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး ဘူဒိုဇာများ၊ ထရပ်ကားများစွာ ပျက်စီးသွားသည်ဟု သိရပြီး ဆုံးရှုံးမှုပမာဏအသေးစိတ်ကို မသိရှိရသေးပါ။ ဒေသခံ ကချင်လူမျိုးများကို ဒုက္ခရောက်စေမည့် အဆိုပါ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ ဗမာပြည်ဘက်မှ Asia World Company, အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ တရုတ်ပြည်ဘက်မှ China Power Investment Corporation (CPI) တို့ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်နေသော စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ကချင်လူထု၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကျောင်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအုပ်စုများ ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှပင် စစ်အဆိုးရက ဇွတ်အတင်း တည်ဆောက်နေသော စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ မြစ်ဆုံ ဗုံးသတင်းများ
Four killed, 12 injured in bomb blasts in Irrawaddy-Myitsone dam site
Bomb blasts hit dam project
Explosions reported at hydropower project in northern Myanmar
Series of bomb blasts hit hydropower plant project in Myanmar
Map of Dams in Burma – http://www.burmariversnetwork.org/
Irrawaddy Mytisone Dam Specifications
Annual production: 16,634 Gwh
About MyitSone Dam
Unusual 2010-ThinGyan News, Photos and Poem From Burma April 16, 2010
Filed under: MY NEWS,OTHERS' NEWS,OTHERS' POEMS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 5:36 pm
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဗမာ့သင်္ကြန် ထူးခြား သတင်းများ (ပြည်တွင်း)
သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ (၁၅၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်) – ရန်ကုန်မှာ ဗုံး(၃)လုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲ
နေ့လည် (၃)နာရီအချိန်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ မည်သူခွဲမှန်းမသိရဘဲ ဗုံး(၃)လုံးဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်။
ဗုံးကွဲပြီးသတင်းဓာတ်ပုံများကြည့်ရန် – http://blog.nyilynnseck.com/2010/04/bomb-blasts-infront-of-x2o-mandap.html
စစ်အဆိုးရသတင်းထုတ်ပြန်မှုအရ (၈)ဦးသေဆုံး၊ (၁၇၀)ဦး (ကျား- ၁၂၅ + မ-၄၅) ဒဏ်ရာရ သွားသည်ဟုသိရ။
CNN သတင်းအဆိုအရ သေဆုံးသူဦးရေမှာ အနည်းဆုံး(၂၀)ဦးခန့်ရှိမည်ဟု သိရ။
သင်္ကြန် အတက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်း (၁၆၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်) – မန္တလေးမှာ လေပြင်းတိုက်၍ ရေကစားမဏ္ဍပ်များ ပြိုလဲ၊ ပျက်စီး
သင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းအချိန် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မန္တလေးမြို့ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ အလုပ်သမားဆေးရုံရှေ့မှ ကျန်းမာရေး ရေကစားမဏ္ဍပ်မှာ ပြိုလဲသွားပြီး အနည်းဆုံး အခြားမဏ္ဍပ်တစ်ခုမက ပျက်စီးသွားကြောင်း သိရ။ ကျန်းမာရေး ရေကစားမဏ္ဍပ်ပေါ်ရှိ မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်းဝိုင်းကြီးမှာလည်း ပြိုလဲသည့်အထဲ ပါဝင်သွားကြောင်းသိရ။ ကျန်းမာရေးမဏ္ဍပ်မှာ အသုံးပြု၍ မရတော့လောက်အောင် လဲပြိုသွားသော်လည်း အခြားမဏ္ဍပ်များမှာမူ ပြင်ဆင်ပြီး ဆက်လက် ရေကစား၍ ရသေးကြောင်း သိရ။
ပြိုလဲသွားသော ကျန်းမာရေး ရေကစားမဏ္ဍပ် ဓာတ်ပုံများ
လောကီက ဆူညံတယ် ။ ။
No Vote Campaign 2010 April 8, 2010
Filed under: OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 4:28 am
မဲမပေးရေး လှုပ်ရှားမှု (No Vote Campaign)
မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေအဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့
ဒဏ်ကို ခံခဲ့ကြရရာမှာ တပ်မတော်သားတွေလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်စုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အကျိုးစီးပွားထက် လူအများအတွက် ရှေ့တန်းတင်သင့်ကြပြီ ထင်ပါတယ်။
လက်နက်မရှိ၊ အာဏာမရှိ၊ အားထားရာမဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အနေထားကို နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရင်မဆိုင်ရင် အားလုံးရဲ့ ဒုက္ခတွေ မဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း
တုတ်၊ ဓါးတွေ ဆွဲစရာ မလိုပါ၊
လက်သီး လက်မောင်းတန်းပြီး အော်ဟစ်နေစရာ မလိုပါ၊
ရှေ့ထွက်ပြီးလည်း ဦးဆောင်စရာ မလိုပါ၊
အအေးချမ်းဆုံး ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ဆက်သွားရင်း ကိုယ်ပိုင်တဲ့ မဲတစ်ပြားကို
တော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မထည့်ရုံပါ။ အကြမ်းမဖက်ပဲ အာဏာရှင်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြ
တစ်ဆင့်တက်ပြီး အမိန့်အာဏာကို မလိုက်နာတာမျိုးတွေနဲ့ အနုနည်းဆန့်ကျင်သွားကြလို့ ရပါ
သေးတယ်။ နိုင်ငံကို ပြည်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပ်မှ ပြည်သူ့ကိုယ်စား
လှယ်တွေ အာဏာရ အုပ်ချုပ်ရိုးထုံးစံရှိတာ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီခဲ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့် (စာဖတ်သူ) ပြည်သူတွေရဲ့ စွမ်းအားကို ယုံကြည်ပါတယ်။ အားထားပါတယ်။ လူတိုင်း
လုပ်နိုင်မယ်လို့ မယူဆပေမယ့် ကြိုးစားကြည့်ကြရအောင်လို့
၀၆၊ ၀၄၊ ၂၀၁၀